ဘာမှမဝတ်ဘဲ ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ပြီး ပစ္စည်းတွေ လိုက်ခိုးလို့ အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ကိုယ်ပျောက် လူသား – Shwe Yaung Lan
ဘာမှမဝတ်ဘဲ ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ပြီး ပစ္စည်းတွေ လိုက်ခိုးလို့ အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ကိုယ်ပျောက် လူသား
By SYL Editor 2Posted on November 8, 2019
ူလူသားတိုင်းဟာ အများနဲ့ မတူတဲ့ အစွမ်းအစ ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြသူတွေများပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူများက မပျံနိုင်ရင် ကိုယ်ကစူပါမင်းလို ပျံချင်တာ ၊ ဘတ်မန်းလို ကယ်တင်ချင်တာ တွေဟာ နိုင်ငံခြား ဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်သလို ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကြောင်မျက်ရှင် စိန်စိန် ၊ သူခိုးကြီးငတက်ပြား စတဲ့ အစွမ်းအစ ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တို့ ဇာတ်လမ်းများကိုလည်း ကြားဖူးကြမှာပါ။ ပေါင်ပုတ်ရင် ကြောင်ရုပ်ဖြစ်သလို ၊ ငှက်ပျောရွက်ပေါ်မှာတောင် အိပ်နိုင်တဲ့ ငတက်ပြားလို အစွမ်းကိုလူသားတိုင်း လိုချင်ကြမှာအမှန်ပါ။ ဒါ့အပြင်ဆေးစွမ်းကောင်း ၊ အဆောင် ၊လက်ဖွဲ့ ၊ အင်းအိုင် ၊ ခလဲ့ ၊ ပီယဆေး စတဲ့ အစွမ်းအစတွေကိုလည်း လူတွေဟာ ရှာဖွေနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ အဲ့လို အစွမ်းအစတွေကို ယုံကြည်တတ်တဲ့ ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ပျောက်ဆေး အစွမ်းကြောင့် ထောင်နန်းစံရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဟာ နတ်ဆရာပေးတဲ့ ကိုယ်ပျောက်ဆေးကို ယုံကြည်ပြီး ဖောက်ထွင်းခဲ့ရာမှာ အခုလို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူခိုးက ထူးထူးဆန်းဆန်း အဝတ်ဗလာနဲ့ အဆောက်အဦးထဲ ဝင်ပြီး ခိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဆေးမေးမြန်းချက်အရ နတ်ဆရာဟာ သူပေးတဲ့ ကိုယ်ပျောက်ဆေးကို ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်လိမ်းပြီး ဖောက်ထွင်းရင် ဘယ်သူမှ မမြင်ရဘူးလို့ ဆိုတာကြောင့် အခုလို လုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။
သူဟာ အရင်ကလည်း အခြားနေရာပေါင်းများစွာမှာ ခိုးဝှက်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဆေးသုံးသလို ၊ စာကြည့်တိုက်က tablet တွေကိုလည်း ခိုးယူခဲ့တဲ့ ရဲမှတ်တမ်းတွေလည်း ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ခိုးမှုတော်တော်များများမှာ သူတစ်ယောက်တည်း ခိုးယူခဲ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့ သူ့ကို လွတ်မြောက်အောင် ကူညီသူ တစ်ယောက်လည်း ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုတော့ အဲ့ဒီ ကူညီသူကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆက်လက် ရှာဖွေနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Previous post သူ့ရဲ့ ဖွားဖွားကို ကားကြီးပေါ် တက်စီးဖို့ ခေါ်နေတဲ့ လွင်မိုးရဲ့ ချစ်စရာ မြေးလေး ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
ဘာမှမဝတ်ဘဲ ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ပြီး ပစ္စည်းတွေ လိုက်ခိုးလို့ အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ကိုယ်ပျောက် လူသား November 8, 2019
သူ့ရဲ့ ဖွားဖွားကို ကားကြီးပေါ် တက်စီးဖို့ ခေါ်နေတဲ့ လွင်မိုးရဲ့ ချစ်စရာ မြေးလေး ( ဗီဒီယိုဖိုင် ) November 8, 2019
ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေကြတဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါက နေလင်းကျော်နဲ့ ဆက်စီမော်ဒယ် ဇာဇာထက် တို့ အချစ်ရေး November 8, 2019
ရန်ကုန်ကို ပြန်ရောက်တာနဲ့ သားသားလေးကို တွေ့လိုက်ရလို့ အပျော်ကြီးပျော်နေတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးတို့ ဇနီးမောင်နှံ ဗီဒီယိုလေး November 8, 2019
ပုဂံဘုရား တစ်ခုမှာ ဓမ္မပါလ စစ်သူကြီးက အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို ဝင်ရောက်ပူးကပ်ပြီး တန်ခိုးပြတဲ့ ဖြစ်စဉ် ( ရပ်သံ ) November 8, 2019
သူ့ရဲ့ ဖွားဖွားကို ကားကြီးပေါ် တက်စီးဖို့ ခေါ်နေတဲ့ လွင်မိုးရဲ့ ချစ်စရာ မြေးလေး ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေကြတဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါက နေလင်းကျော်နဲ့ ဆက်စီမော်ဒယ် ဇာဇာထက် တို့ အချစ်ရေး
ရန်ကုန်ကို ပြန်ရောက်တာနဲ့ သားသားလေးကို တွေ့လိုက်ရလို့ အပျော်ကြီးပျော်နေတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးတို့ ဇနီးမောင်နှံ ဗီဒီယိုလေး
ပုဂံဘုရား တစ်ခုမှာ ဓမ္မပါလ စစ်သူကြီးက အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို ဝင်ရောက်ပူးကပ်ပြီး တန်ခိုးပြတဲ့ ဖြစ်စဉ် ( ရပ်သံ )
ShweYaungLan isapopular online media for Myanmar News and Entertainment. Visit us on Facebook Page.
Contact Us: +959 799 695 046
Address: 11/84 , Insein Township, Yangon
Copyright ShweYaungLan 2019